fa dia slot na slot
fa dia slot informatica
Ao amin'ny Fanjakana Mitambatra ary fikambanana ao ambadiky ny BeGambleAware.org tompon'andraikitra filokana loharano dia navoaka ny tsy miankina ny tatitra ho any amin'ny fisian'ny filokana asa fanohanana ho an'ireo tany Angletera sy pays de Galles. Ny London-ny foibeny GambleAware fiantrana ampiasaina amin'ny fomba ofisialy ny asa fanaovan-gazety famotsorana ny tsipiriany fa ny fanombanana dia natao amin'ny alalan'ny toro-hevitra mafy KantarPublic anatin ' ny roa-taona fandaharana mba hanome fanofanana ny frontline trosa mpanolo-tsaina ao amin'ny Olom-pirenena Toro-hevitra krismasy ravaka amin'ny satro-boninahitra casino melbourne. Ny enterprise nandeha mba hanambara fa ny 29 volana fanadihadiana efa natao manerana ny faritra roa ambin'ny folo Angletera sy pays de Galles, ary efa fantatra 'key mpanamora, ny sakana sy ny fahafahana ho an'ny fandaharana fahombiazana.' Mahafehy ny toerana: GambleAware nilaza fa ny Olom-pirenena Toro-hevitra efa hanakona ny 30.000 eo ho eo ny olona noho ny olana mifandray amin'ny filokana ny teny ny fanadihadiana ary izay efa nahita ny asa fanompoana 'tsara apetraka mba soa aman-tsara mandry sy fanohanana mpanjifa mety, sy miaina, ny filokana manimba'. Ny fikambanana koa nanambara fa ny mpiara-miasa ny front line mpiasa nanao 'hajaina anjara eo amin'ny fiaraha-monina', ary efa nampiseho 'ny fahaizany amin' ny fanomezana ny mpanjifa fanohanana ho saro-pady ny olana.' Fantatra intransigence: na izany Aza, ny olana ny filokana ny fiantrana nandeha mba hamoaka ny fanombanana efa mifanohitra amin'izany fantatra maro vato mahatafintohina ny ho avy fahombiazana ny tompon'andraikitra filokana fandaharam-anisan'izany ny tsy fisian'ny tsy miovaova rehefa tonga teo ny fitiliana ireo fomba fanao mihazakazaka eo an-toerana ny Olom-pirenena Toro-hevitra anjara fanompoana.
GambleAware nanamafy fa ny fanadihadiana efa nataony ireo dia tsy nidina mba 'tsy mahavita ny fitiliana fanontaniana, nahalala henatra sy voafetra ny fahafaha-manao ny front line mpiasa manerana ny sasany ao an-toerana ny birao.' Sage soso-kevitra: Ny fikambanana nanambara fa ankehitriny dia manantena Toro-hevitra ny Olom-pirenena dia diniho nampiany manovaova any ny fitiliana fanontaniana 'handrisihana voajanahary kokoa ny resaka amin'ny mpanjifa momba ny filokana manimba toy ny tsy tapaka ny fampiharana ny toro-hevitra' fa dia slot na slot. Ny vatana ihany koa ny soso-kevitra fa ny fiofanana nomena ny front line mpiasa bebe kokoa tsara, ary tsy tapaka ny famahana ny olana raisina ho tsy mahazo aina amin'ny resaka momba ny filokana manimba' amin ' ny maha-kevitra tao amin'ny tsy tapaka ny ekipa fivoriana mampiseho 'manokana ny fanehoan-kevitra.' Mahomby ny fanatanjahan-tena: Helen Owen manompo toy ny Fanombanana ary ny fanaraha-Maso ny Talen'ny GambleAware ary dia ampiasaina ny fanambarana an-gazety ny adin-tsaina fa ny fanombanana efa hita ny 'anjara asa manan-danja' ny Olom-pirenena Toro-hevitra milalao ao amin'ny dingan'ny 'ny fanomezana torohevitra ho an'ny olona ahiana na miaina filokana ratsy sy signposting azy ireo mba hanampy' fa ny slot amin'ny plc. Avy eo dia manasongadina fa ny fanadihadiana koa fa 'tena sakana' ny ny ho avy fahombiazana ny asa fanohanana ho an'ireo izay mijaly amin'ny filokana sy olana nanana soso-kevitra kokoa ny 'zokiny anjara' ho fampiroboroboana ny endriky ny ho avy fitiliana ny fomba fanao.
Vakio ny fanambarana avy Owen... "Ity tombana nanampy hamantatra ny tena sakana ho amin'ny fahombiazana satria ny filokana ny fanohanana ny asa fanompoana fa dia slot informatica.
Miaraka amin'izany fahatakarana izany isika ankehitriny ary manana ny fijeriny mazava momba ny zavatra fahafahana misy mba hanatsarana ny asa fanompoana sy ny learnings avy io fanombanana efa nandray anjara tamin'ny commissioning ny dingana vaovao, ary modely eo amin'ny firenena ireo Olom-pirenena Toro-hevitra ambaratonga.".